Erik Ten Hag Oo Iska Xaadirinaya Kulanka Manchester United Vs Crystal Palace Ee Lagu Soo Gabogabaynayo Horyaalka - Laacib
HomeWararka CiyaarahaErik ten Hag Oo Iska Xaadirinaya Kulanka Manchester United vs Crystal Palace Ee Lagu Soo Gabogabaynayo Horyaalka
Erik ten Hag Oo Iska Xaadirinaya Kulanka Manchester United vs Crystal Palace Ee Lagu Soo Gabogabaynayo Horyaalka
Tababaraha cusub ee Manchester United ee Erik ten Hag ayaa iska soo xaadirin doona garoonka Selhurst Park marka ay kooxdiisa Manchester United kulanka ugu dambeeya xilli ciyaareedkan Premier League kula dheelayso Crystal Palace toddobaadka dambe.
Erik ten Hag oo ay kooxdiisa Ajax ku guuleysatay horyaalka Eredivisie toddobaadkii hore, ayaa waxa uu kulankiisa ugu dambeeya ee macasalaamaynta uu hoggaamin doonaa Axadda toddobaadkan oo ay la ciyaari doonaan Vitesse, intaa wixii ka dambeeyana waxa uu isku diyaarin doonaa shaqadiisa Old Trafford.
Manchester United ayaa toddobaadkan fasax ah oo aan ciyaari doonin, waxaanay kulankeeda ugu horreeya oo noqon doona midkooda ugu dambeeya xilli ciyaareedkan ay May 22 la ciyaari doontaa Crystal Palace, iyaga oo halkaas kusoo xidhan doona xilli-ciyaareed niyad-jab leh.
United ayaa laga doonayaa guul qasab ah si ay uga qayb-geli akrto Europa League xilli ciyaareedka dambe maadaama ay saddex dhibcood oo kaliya ka horreeyaan West Ham United oo laba ciyaarood u hadhsan yihiin. Haddii ay United dhibco lumiso, isla markaana West Ham soo badiso kulamadeeda, waxay Manchester United ka ciyaari doonaa Europa Conference League.
Ralf Rangnick ayay isagana u noqon doontaa ciyaartii ugu dambaysay ee uu tababare u ahaanayo Manchester United, waxaana wixii ka dambeeya uu ku koobnaan doonaa lataliye uu labada sannadood ee soo socda ka ahaanayo Old Trafford iyadoo sidoo kalena loo fasaxay inuu noqdo tababaraha xulka qaranka Austria oo dhowaan loo magacaabay.
Sida uu qoray wargeyska The Athletic, tababaraha reer Netherlands ee Erik ten Hag ayaa usoo duuli doona magaalada London, waxaana uu ciyaarta Manchester United iyo Crystal Palace ka daawan doonaa garoonka Selhurst Park, isaga oo qiimayn kusii samayn doona ciyaartoyda ka hor inta aanu la wareegin kooxda.